I-OLED okanye i-QLED: yeyiphi eyona teknoloji ilungileyo yeTV ezintsha? Isiphelo sendlela on 🥇
Xa singena kwivenkile ye-elektroniki ukuthenga i-Smart TV entsha, kwiimeko ezininzi siya kufumana amagama amabini kwimakhishithi obuchwephesha: UNGU mi QLED. Nangona ephepheni kubonakala ubuchwephesha obufanayo, enyanisweni la magama mabini achaza ubuchwephesha obahlukileyo kunye nobodwa beepaneli ezenza indawo ebonakalayo kumabonakude (Oko kukuthi, leyo ivelisa imifanekiso ehanjisiweyo).
Ukuba nathi sishiywe sinamathandabuzo malunga nezi zichazi, sifumana isikhokelo esifanelekileyo: apha ngezantsi siza kubonisa, ngamagama alula, Ithetha ntoni i-OLED kunye neQLED kwaye yeyiphi eyona teknoloji iphambili ngoku? xa sithetha nge-high-end okanye i-premium televisions (kunye neendleko eziphantse zihlala ziphezulu kune- € 1000). Ngokucacileyo kwitekhnoloji nganye egqunyiweyo siza kukubonisa nayo ezinye iimodeli ze-Smart TV esinokuzijonga, ukuze ukwazi ukuqhubeka kwangoko nokuthenga kwi-Intanethi eAmazon (apho kuhlala kugcinwa ngokuthelekiswa nevenkile ebonakalayo okanye indawo yokuthenga).
OKUFUNDILEYO FUNDA: Ungayikhetha njani kwaye uyithenge ngeyona Smart TV
Yeyiphi iphaneli yeTV oza kuyikhetha
Kwizahluko ezilandelayo, siza kuqala sikubonise ukuba yintoni Umahluko phakathi kweetekhnoloji ezimbini ezikhankanyiweyo Kwintshayelelo yenqaku kwaye, njengaso nasiphi na isikhokelo esifanelekileyo esixabisa ityuwa yaso, siya kufumana isikhokelo sethu sokuthenga apho kuya kubakho khona ukujonga iithelevishini kwitekhnoloji nganye ekhankanyiweyo, ukuze sihlale sikhetha imodeli efanelekileyo iimfuno zethu.
Umahluko phakathi kwe-OLED kunye ne-QLED
Umahluko phakathi kweentlobo ezimbini zeepaneli ulwakhiwo kwaye kunzima ukugqagqana, nokuba xa ujonga nje kubonakala ngathi unalo igama elifanayo.
Iipaneli ze-OLED zidityaniswa zii-organic ze-LEDs Iyakwazi ukukhupha ukukhanya kwayo, ngaphandle kwemfuneko yepaneli engasemva: enyanisweni, yonke imibala yomfanekiso (i-RGB) kunye namanqaku amhlophe alawulwa zii-pixel ze-organic ze-pixel. Uncedo lokuqala lukhona kubo bonke ukuba lubonwe: xa ipikseli ye-OLED icinyiwe, abamnyama ngokwenene "bamnyama", njengoko kungekho sithuba sokukhanya emva kokucoca ulwelo. Ayisiyongxaki ukuba ii-OLED zikuvumela ukuba ufumane ubumnyama obunzulu kwaye uthelekise ngaphandle kokusebenzisa isoftware eyahlukileyo. Kwelinye icala, nangona kunjalo, ukukhanya kwe-OLEDs akuphezulu kwaye, kwimiboniso ethandwayo kakhulu, banokufumana isiphumo esibi sokuvuka (kuhlawulwa yisoftware).
Iipaneli ze-QLED zifana kakhulu neepaneli zeLCD kuthengisiwe ukuza kuthi ga ngoku, kodwa ngumahluko omkhulu: Iphaneli yokukhanya kwangasemva yenziwe ngamachaphaza amaninzi e-LEDs (Ichaphaza lobungakanani). Le teknoloji ivumela ukufumana umbala obanzi kune-OLED kunye nokuqaqamba okuphezulu (nokuba iphindwe kabini kunee-OLED), ngaphandle kokugqwetha umahluko kunye nenqanaba elimnyama kakhulu (kwezinye iimodeli zokugqibela ziphantse zikumanqanaba e-OLED). . Njengeziphene sifumana ukusetyenziswa okuphezulu kancinci ngoku, ukukhanya okuphezulu okunokucaphukisa (kodwa kunokuhlala kulungelelaniswa), kunye nomnyama ongasoloko ugqibelele, ngakumbi ukuba akukho nkqubo isetyenziswayo. Ukufiphala kwendawo O Ukukhupha okuncinci ngumenzi (oko kukuthi, ezo teknoloji zicima ii-LED ezingasetyenziswanga xa sivelisa iindawo ezimnyama).
Ekupheleni kosuku akukho mntu uphumeleleyo ngokwenyani: itekhnoloji nganye inezinto ezilungileyo nezingalunganga, ke kuyakufuneka silungile ekukhetheni eyona ilungele igumbi lethu lokuhlala kunye neemeko zethu zokukhanyisa, njengoko kubonisiwe kwiNqaku. Ukude kangakanani umabonwakude okanye ukubek'esweni kunokubonwa ngokobungakanani bescreen.
Kwesi sahluko siza kuzama ukukubonisa ezona modeli zibalaseleyo zeTV kuzo zombini ezi ntlobo zetekhnoloji, ukuze ukwazi ukuthelekisa iimodeli ezinconyelwayo kunye nezo zibonakalayo evenkileni okanye kwindawo yokuthenga (apho ifuthe lokubonwayo linokuba sisigqibo sokuthenga).
Ukuba sifuna ukugxila kwi-OLED TV Esikucebisa ukuba ubone yiI-LG OLED TV AI ThinQ OLED55BX6LB, Efumaneka kwiAmazon nge- € 1900.
Kule Smart TV sifumana iphaneli ye-OLED engama-intshi ezingama-65, isisombululo se-4K UHD, inkxaso ye-HDR, iprosesa ye-α7 ye-Gen3 eneDolby Vision, iaudiyo ene-IQ / iDolby Atmos inkxaso, ukuhambelana nenkqubo yokuvumelanisa ividiyo ye-NVIDIA G-Sync, inkqubo yokusebenza ezinikeleyo yeWebos I-ThingQ, uqhagamshelo lweWi-Fi, iBluetooth, kunye nenkxaso yabancedisi bakaGoogle kunye nabancedisi belizwi le-Alexa.
Enye i-TV efanelekileyo ye-OLED esinokuthi sigxile kuyo ngamehlo ethu avaliweyo I-Sony KD75XH8096PBAEP, Iyafumaneka kwiAmazon engaphantsi kwe- € 2000.
Kule TV ye-Smart sifumana iphaneli ye-OLED ye-intshi ezingama-75, isisombululo se-4K UHD, inkxaso ye-HDR, iprosesa ye-4K X-Reality Pro, inkqubo yokusebenza ye-Android TV, uqhagamshelo lweWi-Fi, iBluetooth kunye nenkxaso yezona zincedisi zizwi zidumileyo.
Ukuba endaweni yoko sifuna ukugxila kubuchwephesha beQLED Sikucebisa ukuba uqwalasele Uthotho lweSamsung Q70T, Iyafumaneka kwiAmazon engaphantsi kwe- € 2000.
Kule TV sifumana iphaneli ye-QLED engama-intshi ezingama-75, isisombululo se-4K UHD, inkxaso ye-HDR ye-Quantum, iprosesa ye-Quantum Dot, inkqubo yokufiphaza yendawo, uqhagamshelo lwe-Wi-Fi, iBluetooth kunye nenkqubo yokusebenza ezinikeleyo (iyahambelana nazo zonke ezona zicelo zidumileyo).
Ukuba endaweni yoko sifuna i-QLED yeTV esezantsi, sinokugxila kwi Umabonwakude TCL 50C711, Iyafumaneka kwiAmazon engaphantsi kwe- € 600.
Umabonwakude onomtsalane unepaneli ye-QLED ye-intshi ezingama-50, isisombululo se-4K, inkqubo ye-HDR 10+, ukukhanya okunciphise ukukhanya, inkqubo yesandi seDolby Vision, inkxaso yeDolby Atmos, ulawulo lwezwi olungenazandla, kunye nenkqubo yokusebenza kwe-Android.
Ngokucacileyo, njengako konke ukuthelekiswa okuhle kwezobuchwephesha, akukho mntu uphumeleleyo: ukuba sithanda ukubukela uninzi lweemovie kunye nemidlalo yeTV ebusuku okanye ebumnyameni kukhethwa ukugxila kwii-OLEDs (ezinabantu abamnyama abathandekayo), kanti ukuba senza njalo sibukele umabonwakude kwindawo eqaqambileyo, kuyacetyiswa ukuba sigxile kwii-QLED eziphezulu, ukuze sikwazi ukufaka yonke imibala nazo zonke iinkcukacha ngomgangatho ophezulu.
Ukuqinisekisa ukuba sihlala siyithenga eyona Smart TV yeemfuno zethu kwaye siyithenga kwindawo efanelekileyo kwaye ukuba ikhona kungcono ukuthenga iTV kwi-intanethi okanye kwivenkile.
Ukuba, ngokuchaseneyo, sifuna ukomeleza ingxoxo malunga neenkqubo zokusebenza ze-Smart TV kwaye ukhethe eyona nkqubo ilungileyo, sicebisa ukuba uwafunde amanqaku Ithetha ukuthini i-Smart TV, ziziphi izibonelelo kunye nokungalunganga? mi Eyona Smart TV ye-Samsung, i-Sony kunye neNkqubo ye-LG App.